မုန့်ညက်အဘို့အပြီးလျှင်ဟောင်းနွမ်းပေါင်မုန့်ဘီစကွတ် | မီးဖိုချောင်ချက်ပြုတ်နည်းများ
အိမ်မှာကျင်းပတဲ့ပွဲဒါမှမဟုတ်စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာပွဲကျင်းပပြီးတဲ့အခါအိမ်မှာမုန့်ရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့တတ်နိုင်သမျှ ဟောင်းနွမ်းသောမုန့်၏အားသာချက်ကိုယူ? ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဲဒီမေးခွန်းတွေမေးပြီးအဲဒီမုန့်ဘီစကွတ်၊ ဟုတ်တယ်ပေါင်မုန့်ကိုတွေ့ခဲ့တယ်။ ဤကွတ်ကီးများ၏အခြေခံကိုမီးဖို၌ဟောင်းနွမ်းသောပေါင်မုန့်ကိုခြောက်သွေ့စေပြီး၎င်းကိုအစားအစာထုတ်လုပ်ရေးတွင်ကြိတ်ခွဲခြင်းဖြင့်ရရှိနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်အရသာပေးရန်ပေါင်မုန့်ဖြင့်လိုက်ပါသွားသည် ကုန်တယ်ပျားရည်နှင့်ချောကလက် အတွက်ပုံမှန်အတိုင်းပါဝင်ပစ္စည်းများအပြင်ဖြူ ကွတ်ကီးပြုလုပ်ခြင်း။ ဟောင်းနွမ်းသောပေါင်မုန့်၏အားသာချက်ကိုယူရန်အကောင်းဆုံးသောစာရွက်တစ်ရွက်ကနေ့လည်ခင်းကော်ဖီနှင့်မွှေးကြိုင်သောခါးသီးမှုကိုခံစားရစေသည်။ သူတို့ကိုကြိုးစားစမ်းကြည့်ပါ ဦး ။
1 ပါဝင်ပစ္စည်းများ (20 ယူနစ်)
ပါဝင်ပစ္စည်းများ (20 ယူနစ်)
၇၀ ဂ။ သကြား
၄၀ ဂရမ်။ အခန်းအပူချိန်မှာထောပတ်
၁၅၀ ဂရမ်။ ပေါင်မုန့်
45 ဂရမ်။ မုန့်ညက်မုန့်ညက်
၂ ဂ။ တော်ဝင်အမျိုးအစားဓာတုတဆေး
၂၅ ဂရမ်။ မြေပဲပျားရည်
၂၅ ဂရမ်။ ကုန်တယ်ပျားရည်
မုန့် ၂ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၊ (၃၅% ဖျာ။ အဆီ)
၅၀ ဂရမ်။ minced အဖြူရောင်ချောကလက်
"ကုတ်အင်္ကျီ" cookies များကိုမှသကြားဓာတ်
စာရွက်၏ပြင်ဆင်မှုမစတင်မီကျွန်ုပ်တို့သည်အဓိကပါဝင်ပစ္စည်းများအနက်မှတစ်ခုကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမည် ပေါင်မုန့်။ အနည်းဆုံး ၂၅ မိနစ်ခန့်ကြာအောင်ထားပြီးလျှင်ဟောင်းနွမ်းနေသောပေါင်မုန့်ကိုမီးဖို၌ ၁၀၀ ံစင်တီဂရိတ်တွင်ထားပါ။ ထို့နောက်ပေါင်မုန့်ခြောက်များကိုရရှိရန်အတွက်အစားအစာထုတ်လုပ်သူနှင့်ကြိတ်ဆုံကြိတ်ပါ။
တစ်ခေါင်းအုံးနှင့်လျှပ်စစ်ချောင်းများ၏အကူအညီဖြင့်သကြားနှင့်အတူထောပတ်ရိုက်တယ်။ အရောအနှော creamy ဖြစ်သည့်အခါကြက်ဥထည့်ပြီးလုံးဝပေါင်းစပ်သည်အထိတိုးနှင့်ရိုက်နှက်ပါ။ ထိုအခါ breadcrumbs နှင့်ထည့်ပါ မြေပဲပျားရည် နှင့်ပေါ့ပေါ့တန်တန်, သစ်သားဇွန်းနှင့်အတူရောမွှေပါ။
ထို့နောက်ထည့်ပါ ဆန်ခါ၊နှင့်ဘောလုံးကိုလွတ်အောင်ပြုလုပ်ရန်သင်၏လက်များဖြင့်ပွားပါ။ ထို့နောက်လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်းမှနှစ်မုန့်ကိုထည့်ပေါင်းပြီးကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောမုန့်စိမ်းဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကုန်တယ်ဗာဒံသီးနှင့်ကုန်တယ်ချောကလက်ထည့်ပါ သင်၏လက်နှင့်အတူရောမွှေပါ အနည်းငယ်သင်အလွန်အကျွံ knead လျှင်ချောကလက်အရည်ပျော်လိမ့်မယ်!
မုန့်စိမ်းကိုပလပ်စတစ်ထုပ်ပိုးပြီးထားပါ။ သငျသညျမုန့်စိမ်းကိုယူနိုင်အောင်ရုပ်ရှင်၏တူညီသောကတ်ထူပြားကွန်တိန်နာ၏အားသာချက်ယူနိုင်ပါတယ် စတုရန်းပုံသဏ္.ာန်။ ပြီးတာနဲ့ရေခဲသေတ္တာထဲမှာအနည်းဆုံး ၁ နာရီစောင့်ပါ။
တစ်နာရီအကြာတွင်ရေခဲသေတ္တာထဲမှမုန့်စိမ်းကို ယူ၍ နို့နှင့်တိုက်ပါ။ အောက်ပါ သကြား၌နှစ်ပြီးလျှင် ဒါကြောင့်လိုက်နာစောင့်ထိန်းနိုင်အောင်နှိပ် granules ။ အခုဆိုရင် 1 cmd cookies တွေကိုဖြတ်နိုင်ပြီ။ ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အထူ။
မှာဖုတ်ပါ 180 အတွက်20ºC။ ကွတ်ကီးများကိုလှန်လှောပြီး ၁၀ မိနစ်မှ ၁၅ မိနစ်ခန့်ကြာအောင် 10 brown at တွင်ရွှေအညိုသည်အထိမုန့်ဖုတ်ရမည်။ ကွတ်ကီးတွေကိုမီးဖိုထဲကယူပြီးစင်ပေါ်မှာအအေးခံပါ။
ပိုမိုသိရှိလိုပါက - ချောကလက်အချိုရည်များ
အဘိတ်အချိန် 45 မိနစ်
ချက်ပြုတ်ချိန် 30 မိနစ်
စုစုပေါင်းအချိန် 1 နာရီနှင့်မိနစ် 15
ဝတ်ပြုနှုန်း Kilocalories 85
အသင့်စားဖွယ်, နိုင်ငံခြားအစားအသောက်များရောင်းသောဆိုင်, အချိုပွဲ
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - စတင်ပြုလုပ်ခြင်း » အပေါင်းအဖော် » အသင့်စားဖွယ်, နိုင်ငံခြားအစားအသောက်များရောင်းသောဆိုင် » ပေါင်မုန့်၊ ဗာဒံနှင့်ချောကလက်စသည်တို့ဖြစ်သည်